SAWIRRO MUUQAAL DOG EY MAREYKAN AH, 4 - EEYAHA
Sawirro Muuqaal Dog Ey Mareykan ah, 4
Buluug-sanka buluug-sanka American Pit Bull Terrier eey 3 3 1/2 bilood jir ah
Staffordshire Dog Ey
Yankee Terrier - magaca Waqooyiga
pitbull xoolaha Australia darka eey
Rocky buluug iyo cadaan Mareykan ah Godka Bull Terrier eey yar oo ah 3 1/2 bilood jir
Qiimaha qaybta c eeyga
Kani waa King Kane eeyaha 'Bull Bull' oo jira 10 1/2 toddobaad. Wuxuu leeyahay cillad meesha lugaha midig ay ka goolan yihiin, laakiin waa inuu toosiyaa markuu korayo.
King Kane ee Eey Pit Bull ee 10 1/2 toddobaad jir
Cabbirka qaangaarka 'Pull Bull' aad buu u kala duwanaan karaa.
'Kani waa Tilly, My American Pitbull Terrier at 1 sano jir. Sida kaaga muuqata sawirkeeda waxay leedahay 3 lugood waxayna leedahay sheeko. Tilly ayaa looga tagay shaqadayda (waxaan ahay farsamo yaqaan xoolaha ah oo jooga cisbitaalka xoolaha). Waxaa soo weerartay eey kale markii ay jirtay qiyaastii 4 bilood oo milkiilaheedii hore uusan laheyn saxan lugteeda la galiyay sida ay ahayd. Waxay u timid inay ka soo qaaddo shaqadayda waxayna keentay Tilly walaasheed Pigglett si ay u raacdo oo keliya .... Ka dib markay soo qaadday ilaa 30 daqiiqo ka dib labadoodaba waxaa soo celiyey shisheeyayaal. Tilly walaasheed waxay cago dhigatay Tilly muraayad ayeeyna ku jirtaa waxaa naloo sheegay in ay saarnaayeen gaari xamuul ah cagaha walaasheedna ay ku degeen matoorka gaariga. Milkiilahooda ayaa booqday kaliya hal jeer burburka kadib wuxuuna siiyay lambar been abuur ah. Dib ugama aysan noqonin inay sheegato eeyadeeda intaas ka dib. Tilly waxay ku noolayd shaqadayda ilaa Ogosto 2009. Uma oggolaan karin inay hoos u dhigaan. Waxaan korsaday Tilly oo wata waraaqo sharciyeed oo cadeynaya in laga tagay hadana ayhayga tahay. Tilly ayaa markaa lugaha laga jaray si ay ugu noolaato nolol caadi ah iyadana wax weyn ayey qabaneysaa. Tilly ayaa noloshayda si aad ah u badalay runtiina wuxuu i tusay sida weyn ee Pitbull u noqon karo inkasta oo sumcad xumo ay leeyihiin. Tilly ayaa cadeyn u ah eeyadan inay yihiin kuwo si adag u jecel isla markaana ay yihiin XAYAWAANO CAAN AH.
Basbaaskeyga (Pit Bull) si lama filaan ah ayuu u dhintey afar sano ka hor wuuna xanuunsaday sidii aan ilmahayga u waayey. Markay gabadhii Basbaaska dhimatay runtii waxaan dareemay khasaaraha, daawashada TV-ga iyadoo gabadhaydu dhabarka iga goynin aniga oo kalyaheyga daciifka ah diirran, ilaa sariirteyda dib isugu soo laabato iyada oo aan raadineynin baraha diirran, carruurteydana ay ka maqantahay barkin fiican , hoosta diirran ee Godka Godka jecel. Dibi Bulls waa illaa iyo hadda nooca ugu xun ee halkaas jooga. Qofna runtii ma oga sida cajiibka ah ee tarankaani u yahay mooyee inay ku barakeeyeen aqoon ama jacayl. Ka dib afar sano oo dheer oo aan jeclaystay inaan mar kale noqdo Hooyo Doofaar Doofaar ah (sida aan jeclahay inaan ugu yeedho doofaarrada wiggly) waxaan aakhirkii helay Nellie. Nellie wuxuu ka mid ahaa qoyskeena mudo bil ah jacaylka caanka ah ee loo yaqaan 'Pit Bull' runtiina wuu i ceejiyey waxaan dareemayaa inaan iska sii daayo anigoo aan gurigeyga la wadaagin god dheer. Hadda kulligeen waan dhammaystireynaa waqtiga lumay. Ciyaar soo qaadasho, socod dheer , oo wax ku baraya eeyaha aan xariifka u ahay dhammaan xeeladaha hagaagsan ee aad ka hesho joornaalada cagajuglaynta cagajuglaynta. Wiil Terrier-ka runti wuu soo baxaa markaad leedahay eey digtoonaada! Nellie way jeceshahay oo aqbashaa walaalaheeda waaweyn Doc ( Duuliyaha Collie ) iyo Jake (inta weyn nooc isku dhafan ) iyo seddexda gabdhood ee ay jeceshahay ee nooca loo yaqaan (Missy, Baby iyo Deuce). Nellie runti waxay isku dayeysaa sida ugu fiican inay noqoto gabar yar oo xushmad leh, xitaa marka ay qalad samayso waxaad u sheegi kartaa inay ku dadaali doonto sida saxda ah 'waqtiga soo socda.' Xitaa dabeecadda la isweydiinayo waa mid aad u yar, oo aan ahayn tii iyada ka horreysay, Gabadha Basbaaska ah waxay igu haysay suulasha luuqadeyda muddo labo sano ah. (Basbaasku wuxuu rabay sharaabaad, nigis iyo barkimooyin.) Nellie waxay noqon doontaa safiir isir ah haddii ay igu qaadato toban sano, aad baan ugu heersanahay isirkan aniga iyo aniga iyo doofaarkaygu yar yar ayaan ku faafin doonaa sida cajiibka ah eeyadan ay noqon karaan , hadday sidaas tahay waan ka takhalusi karnaa milkiilayaasha xun iyo taas BSL . Mamnuuco Waxqabadku Maaha Taranka! PS silsilad haku xidhin xubinta qoyskaaga , waxay ku dhaawaceysaa dareen ahaan. Hooyo Aad U Faraxsan Pull Bull Momma '
'Kani waa Malaggayga, gabadhayda 2 jirka ah ee Pitbull Terrier. Waxaan ka soo iibsaday saaxiib aan daryeeli karin iyada oo jirta 7 bilood. Waxaa noo muuqatay inaan si fiican loo daryeelin bilawgii nolosheeda. Sida websaydhkaagu si cad u sheego, Pitbull Terrier wuxuu u baahan yahay 'hoggaamiye xirmo adag, laakiin deggan.' Xaqiiqdii wuxuu ka tagay qaybta xasilloonida. Markii ay gurigeeda keentay waxay ahayd mid xishood badan oo xishood badan, laakiin in yar oo ka mid ah hogaaminta xirmooyinka caafimaadka leh waxay isu rogtay qoys wanaagsan iyo wehel shaqsiyeed. Iyadu waa eey waardiye ah oo heer sare ah. Way na ogeysiin doontaa marka qof u dhow yahay hareeraha guriga dibaddiisa laakiin had iyo jeer wuxuu ku qaabilaa dadka soo booqda cusub sanka duuban oo loo yaqaanno dhoolla-caddaynteeda soo dhaweyn. Waxaan ogaanay in tababarku ahaa neecaw iyada ah wax walba bartay dhakhso badan fadhi, fadhi, maxaa magaceygu ​​yahay (hadal), calaacal, rogrog, xitaa daawo. Marnaba kuma qasbaneyn inaan u tababbarno inay timaaddo, astaamaheeda daacadnimo ee adag markasta iyada ayay safka ku haysay. Waxay jeceshahay inay ciyaarto dheeli tiris, soo jiidasho-dagaal iyo dhuumasho-n-doon. Iyada oo ciyaarta jiidaya-dagaalka waxaan bilownay erey sii deyn ah. Tababbar joogto ah ayay hadda ku heshay xirfadaha fuulitaanka geedaha, dabbaasha si ay ula soo baxdo iyo sidoo kale inay jiido 2 jeer culeyskeeda oo ah 60 rodol. Anaga jimicsi ku samee maalin kasta iyada oo la lugeynayo iyo booqashooyinka jardiinooyinka eyda oo kubbadda lagu tuuro. Iyadu si daacadnimo ah uma lahan dhaqanno xunxun waxay kaliya jeceshahay inay wejigaaga iyo dhabta ku dhunkato illaa aad maqaarkaaga dareemi weydo. Isbarasho sax ah ayay ku hareeraysan kartaa, kuna xirnaan kartaa xarigga, eeyaha yar yar. Waxaan leenahay a Dachshund - Collie qas, bisado iyo xayawaanka yaryar , ( fallaaraha iyo a Bakey ) oo iyadu way la wanaagsan tahay iyaga. Angel waa isku dheelitirnaan Pit Bull Terrier maxaa yeelay waxay leedahay nolol caafimaad leh oo qaabeysan waana ay muujineysaa.
'Tani waa Tangy. Iyadu waa eeygii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara qoyskeena. Iyadu waa APBT, kuwa halkaas jooga ee ku takri-falaya xayawaanka xun, weligood midna ma lahan. Xaaskeyga iyo aniga waxaan dhawaan u dabaaldegnay sanad-guuradeena 15-sano mana waligeyna tixgelin xitaa eey gudaha ah illaa aan ka helnay Tangy. Waxaan leenahay 2 caruur ah, wiil 13-jir ah iyo gabar 3-sano jir ah. Tangy waa saaxiibkood ugu fiican. Eygan waxaas oo dhami wuu leeyahay, maskax, muuqaal iyo qurux. Iyadu waa eeyga ugu caqliga badan ee aan abid yeesho. Way ka fududahay tababbarka dheriga gabadheena 3-jirka ah. Waxay u keentay qoyskeena farxad iyo raynrayn waxaan sugeynaa sanado badan oo raaxo iyo kalgacal leh. PS Qofkasta oo ka fikiraya lahaanshaha APBT, fadlan ka hubi qaar ka mid ah ururada badbaadinta deegaanka. oo waxaad badbaadin kartaa nafta oo waxaad ka dhigi kartaa saaxiibka ugu fiican ee qoyskaagu yeelan karo. '
Hannah Bull Bull at 1 sano jir
'Eygan quruxda badan waa Layla. Iyadu waa 2 jir Pit Bull. Waan ka warwareegayey helitaanka Dulliga Pit laakiin hadda oo aan hadda leeyahay mid ka mid ah, ma jiro nooc kale oo aan doonayo. Layla waa eey aad u daacad ah oo jecel. Iyadu waa ham weyn oo jecel inay ka farxiso qof walba. Waxay had iyo jeer u keentaa dhoola cadeyn qof kasta oo ka tirsan qoyskeyga. Noocani wuxuu sumcad xun ku leeyahay inuu yahay xayawaan loola jeedo rabshad, marka dhab ahaantii aysan ahayn. Dabeecaddan waa in kaliya lagu eedeeyaa milkiilaha. Xusuusnow inaysan jirin eeyo xun, oo kaliya milkiilayaasha xun !!!!
'Kani waa Snoop Dog iyo Luci, oo labaduba ah Pull Bull Terriers. Snoop waa midab madow oo cadaan ah Luci waa shukulaato cas-sanka. Snoop waa 3 sano jir Luci waa 1 sano jir sawirkan. '
Sida aad u aragto, Snoop Dog iyo Luci waa baradho waaweyn oo gogol ...
qashinka shaybaarka madow ee american american
Fowdo eeyaha Godka Bull Terrier ee 3 bilood jir
Fowdo eeyaha Godka Bull Terrier ee 6 bilood jira
'Kani waa Bunky, waa cunugeyga Pitbull ee afar bilood jira. Waxaan ku noolnahay Arjantiin, waddan dagaal eygu weli yahay goob caadi ah, sidaas darteedna waa dagaal joogto ah deriska iyo qoysaska maxalliga ah oo naceyb xooggan ka qaba noocyadan cajiibka ah. Qaar badan oo ka mid ahi way la yaabeen markay arkeen isagoo la ciyaaraya saaxiibkay saaxiibkay gabadhayda 3-jirka ah, ama gabadhayda 9-jirka ah ee aan aabaha u ahay. Dhegaha ayey ka jiidayaan, cunnadiina way ka qaadayaan waxayna si joogto ah ugu halgamayaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen, hawl fududna ma leh maadaama uu hadda miisaankiisu yahay 10 kgs! Xitaa waxaan qabtay gabadheyda aan dhaley aniga oo dhajinaya dharka caruusadaha maalin dhaweyd! Dadka intiisa badani si daacadnimo ah uma rumaysan karaan in eeygan 'halista ah' ay suuragal tahay in wax badan loo dulqaato waxaanan had iyo goor la doodaa dadka na arka annaga socod maalinle ah , Isagoo isku dayaya inuu sharaxaad ka bixiyo inaysan jirin wax sida eey xun ah, oo kaliya milkiilayaasha xun. Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyaha kale ee baarkinka imikana ay yaqaaniin qaar ka mid ah eeyaha kale ee lugeynaya way ku faraxsan yihiin inay u ogolaadaan inuu ciyaaro. Bunky wuxuu jecelyahay walaashiis Nina oo jirta shan bilood Belgium Shepherd . Si daacadnimo ah uma fahmi karo cuqdada ay dadku ka qabaan jiritaankan cajiibka ah, ka maqnaan maayo isaga la'aantiis meel walbana wuu ila raacaa. '
'Kani waa Boggayaga Bull Rocky. Ninkayga iyo waxaan ka soo qaadanay rodol qiyaastii 3 sano ka hor. Isagu waa eeyga ugu jecel, kalgacalka iyo kalgacalka badan. Weydiisan waayey wehel wanaagsan. Rocky wuxuu jecel yahay inuu ku seexdo sariirteena oo uu hurdo habeenkii oo dhan. Wuxuu sankiisa ka aasaa daboolka hoostiisa si uu u kululaado. Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro saaxiibadiisa eyga ah. Markuu ag joogo dadka waaweyn iyo carruurta, waxay la mid tahay inuu og yahay inuu u baahan yahay inuu noqdo mid jilicsan (oo uu yahay si kasta) Rocky wuxuu jecel yahay ficilka, laakiin wuxuu jeclaan lahaa inuu ku nasto sariirta ama sariirtiisa oo uu TV-ga la daawado hooyada iyo aabaha. Ninkeygu wuxuu tababaray Rocky isagoo adeegsanaya farsamooyinka Cesar Millan waxaanan ka dhihi karaa hoosta qalbigayga, Rocky waa eey deggan, oo adeeca oo garanaya soohdimihiisa iyo xaddidiisa. Ka dib markii aan Rocky ku jirnay qoyskeenna, weligeen ma yeelan doonno nooc kale oo eey ah mar walbana waxaan ka heli doonnaa Pitbulls-keenaaga si aan u hubino in nolol la badbaadiyo.
Rocky the Bull Dibiga
Angel, tan-jirka 2 jirka ah iyo caddaanka Mareykanka Pit Bull Terrier iyo Wizzy oo ah 4-sano jir britle iyo cadaan cad - waxay sidoo kale yihiin baradhada gogosha! Ku Naso Nabada, Wizzy.
Nala, Bull American godka dibi waxaa jira! Waxay jeceshahay qof walba waxayna aaminsan tahay in qof walba uu jecel yahay iyada.
Nala Booliga Mareykanka ee loo yaqaan 'Bull Bull' oo ah ubax weyn
Nala Pit Bull oo ah eey yar
Iska ilow nidaamyada amniga ee murugsan! Waxaan ku kalsoonahay nidaamkeena Petey / Nala .’— American Pit Bull Terriers Petey iyo Nala, oo la nool a 6-rodol Chihuahua, Chico , yaa xukuma guriga. Haa, Chihuahua waa madaxa godadka!
shaybaarka shukulaatada iyo isku dhafka chihuahua
cabirka isku dhafka american bulldog pitbull
sanka cas oo lagu qasay sawirada sanka buluugga buluugga ah